I-2-Igumbi le-Apartment - 50 m2 - i-Atmospheric flat
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPaulina
Indawo epholileyo embindini weSzczecin. Ilungele isibini, usapho, abahlobo okanye abantu abahamba ngeshishini. Kufuphi: igrosari, iikhefi, iindawo zokutyela, izithuthi zikawonke-wonke, uloliwe kunye nesikhululo sebhasi. Ukuhamba umgama ukuya kwidolophu yakudala kunye ne-waterfront. I-apartament iqaqambile kwaye icocekile ngokugqityezelwa kwangoku kunye nevintage. Inamagumbi ama-2: igumbi lokuhlala + ikona yokulala enokufikelela kwibalcony ethandekayo kunye negumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini kunye nepiyano. Phakathi kwamagumbi ekhitshi langoku kunye negumbi lokuhlambela elitsha.
Indlu inamagumbi amabini: igumbi lokuhlala elinekona yokulala (ibhedi enye 120x200cm) kunye negumbi lokulala elibanzi (ibhedi ephindwe kabini 140x200cm). Iindwendwe zilahla igumbi lokuhlambela langoku kunye nekhitshi kunye ne-eqipement epheleleyo. Ukuzijonga ngokwakho kunokwenzeka-pls undazise kwangaphambili. Indawo ihlaziywe ngokupheleleyo mva nje. Iindwendwe zithanda ibhalkhoni ehlotyeni kunye nohambo olufutshane oluhle ukuya kumbindi wesixeko.
Indawo elungiselelwe ukusebenza: idesika, itafile
4.91 · Izimvo eziyi-267
Indawo yokuhlala ikufuphi nesikhululo sikaloliwe kunye nokuhamba umgama ukuya kwidolophu endala kunye namanzi ngaphambili. Iindawo ezininzi zokutyela kunye neecafe zijikeleze.
Ungaqhagamshelana nam nangaliphi na ixesha ngefowuni nangeposi. Ndiyavuya ukudibana neendwendwe zam. Ndiyakuthanda ukwazi abantu abatsha kunye neenkcubeko.